20kw-660kw Deutz Motor Generator Soo-saare,Soo-saaraha - Fmwpower.com
Deutz loo yaqaano generator wuxuu ka kooban yahay Deutz engine diesel iyo Stamford koronto-dhaliye, koronto-dhaliye Leroy ama koronto-dhaliye FMW oo leh Deepsea, ComAp ama Module kontoroolka Smartgen.
Awoodda Awoodda: 20kw ilaa 660kw
The engine of Generator Deutz waxaa sidoo kale loo qorsheeyay oo laga soo saaraa Shiinaha iyada oo laba warshadood oo isku dhafan oo ay la socdaan Deutz dhabta ah iyo tignoolaji. Isticmaalayaasha Deutz loo yaqaano generator ku raaxaystaan ​​sababtoo ah shuruudahooda gaarka ah ee waxqabadka, cabbirka iyo naqshadeynta koronto-dhaliyaha iyo sidoo kale sababta tayada Jarmalka laakiin qiimo aad u fiican. Awoodda awoodda Deutz genset wuxuu ka yimid 20kw ilaa 660kw .
1. Qodobka Deutz Engine Generator Qeexida Aasaasiga ah
Hore : 50kw-800kw matoor matoor ah oo matoor ah
Xiga : 50kw-660kw matoor matoor dabacsan
Mawduuca : 20kw-660kw Deutz Motor Generator